Iskuul xirfadeedka sare - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Iskuul xirfadeedka sare
Waxbarashada iskuul xirfadeedka sare (ammattikorkeakoulu) waa gacan ka qabad ah. Haddii aad ka soo qalinjebiso iskuul xirfadeedka sare waxaad inta badan naftaada u heshay aqoon xirfadeed.
Iskuul xirafdeedka sare waxaad ku baraneysaa luqada Finnishka ama Iswidishka ama ingiriis. Iskuul xirfadeedyo badan waxaa laga helaa barnaamijyo waxbarasho oo ku baxaya luqada ingiriiska.
Waad codsan kartaa iskuul xirfadeedka sare marka aad dhameyso iskuulka xirfadda ama dugsiga sare Finland ama wadamadda kale. K aqriso wixii dheeri ah bogga InfoFinlandi Dalabashada waxbarashada.
Iskuul xirfadeedyada sarsare waxaad ku baran kartaa aqoon xirfadeedyo badan. Qoysaska waxaa ku jira xirfadaha tusaalaha ah ee aad baran karto:
ilaha dhaqaalaha ee daciiciga ah iyo cilmiga bii’ada (injineerka dhaqaalaha keynta, naqshadeeyaha dhulka)
waxbarshada maadiga ah iyo barbaarinta (turjubaanka luqada dhegoolaha)
dhaqanka (muusikada, qorsheeyaha qalabeynta)
safarka, nafaqeynta iyo cilmiga dhaqaalaha (mas’uul baar, shaqaale hoteel)
sooshalka, caafimaadka iyo jimicsiga (umuliso, fiisiyoteraabiiste kalkaaliso caafimaad)
cilmiga bulshada, cilmiga maamulka iyo maareynta dhaqaalaha (wada-xaajoodaha iibka, kaaliyaha suuq-geynta)
cilmiga farsamada iyo socodka gaadiidka (injineerka baabuurta, madaxa mashiinka ee markabka)
Waxbarashada maalintii oo dhan ah waxay qaadataa qiyaastii afar sano. Waqtiga waxbarashadu wuxuu ku xiran yahay barnaamijka waxbarashada iyo habsami socodka waxbarashada qofka.
Waxbarashooyinka waxaa ka mid ah leylis waxqabadyo badan. Waxbarashada waxaa ku jira sidoo kale shaqo ku tababarasho.
Macluumaadka aasaasiga ah ee iskuul xirfadeedka sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Liiska iskuul xirfadeedyada sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Ururka ardayda ee iskuul xirfadeedka sareFinnish | Iswidish
Waxbarashada diyaarinta ah ee dadka dalka u soo guuray
Iskuul xirfadeedku wuxuu dadka dalka u soo guuray u qabanqaabin karaa waxbarasho lacag la'aan ah, taas oo yoolkeedu yahay in ardayga la siiyo aqoon luqadeed ku filan iyo diyaargarowyada kale waxbarashada iskuul xirfadeedka tacliinta sare dartood. Waxbarashooyinka waxaa lagu layliyaa luqada finnishka, aqrinta qidcadaha qoran iyo xirfadda barashada. Intaas waxaa dheer oo ay ardaydu helayaan macluumaadka majaladaha waxbarashada, fursadaha shaqo iyo waxbarashooyinka shahaadada lagu gaaro. Waxbarashada diyaarinta ah dadka codsadanaya waxaa inta badan looga baahan aqoonta luqada finnishka heerka B1 ama B2.
Iskuul xirfadeedka sare ee furan
Iskuul xirfadeedka sare ee furan waxaad ka heleysaa koorsooyin maadooyinka iskuul xirfadeedka sare. Qof walbaa wax ka baran kara iskuul xirfadeedka sare ee furan. iskuul xirfadeedka sare ee furan waxaad wax kabaran kartaa xitaa haddaadan horey shahaado u wadan. Ka aqriso wixii dheeri ah bogga InfoFinlandi Waxbarashadda hiwaayada ah.
Sii wadashada waxbarashada ee iskuul xirfadeedka
Haddii aad dooneyso inaad sii qota-dheereyso aqoontaada xirfadeed waxaad sameyn kartaa shahaadada takhasuska ee iskuul xirfadeedka sare (ylempi ammattikorkeakoulututkinto). Waxaa loogu talagalay dadka ka qalin-jebiya iskuul xirfadeedka sare islamarkaasna shaqeeya.
Waxaad codsan kartaa sameynta shahaadada takhasuska ee iskuul xirfadeedka sare haddii aad heysato
Shahaadada iskuul xirfadeedka sare (ammattikorkeakoulututkinto)
shahaadada iskuulka tacliinta sare
aad ugu yaraan leedahay saddex sano waayo-aragnimo ah oo majaladan lagu dabaqi karo
Codso shahaadada waxbarashada shahaadada takhasuska ee iskuul xirfadeedka sare inta lagu jiro codsashada wadajirka ah. Codsashada wadajirka ahi waa laba jeer sanadkii, guga iyo deyrta. Ka sii aqri macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsiga wadajirka ah bogga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.
Dhameynta waxbarashada shahaadada takhasuska ee iskuul xirfadeedka sare waxay qaadataa qiyaastii 1.5 sano (sanad iyo bar). Baaxadda waxbarashaduna waa qiyaastii 60 ama 90 dhibco-cashareed.
Waxbarashooyinka takhasuska ee iskuul xirfadeedka sare waxay qoto-dheereeyaan oo ballaariyaan aqoonta xirfadaada. Kalkaaliyayaasha caafimaadku tusaale ahaan waxay baran karaan takhasuska iskuul xirfadeedka sare, waxbarashadaas oo ku saabsan baxnaanada. Waxaad xitaa dooran kartaa waxbarasho ku baxeysa luqada Ingiriiska.